ONIVERSITEN’I MAHAJANGA : Hifarana anio ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo mpianatra mangataka trano
Nivoaka ny fanapahan-kevitra avy amin’ny mpitantanana ny Oniversiten’i Mahajanga mikasika ny fizarana ny trano eny amin’ny Campus Ambondrona sy ny eny amin’ny cité Tsaramandroso. 10 mai 2017
Fantatra tamin’izany fa hifarana anio 10 mey ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo mpianatra manao ny fangatahana ny trano ipetrahana ho amin’ity taom-pianarana vaovao ity.
Raha ny zava-misy dia misy andiana mpianatra, izay mivondrona ao amin’ny biraon’ny Bdeum (Bureau des étudiants universitaire de Mahajanga) no manery ireo mpianatra tsy hanao io fangatahana ny antontan-taratasy hipetrahana amin’ny trano amin’ny mpitantana ny onivetsite io fa amin’ny biraon’ny mpianatra izay voalaza etsy ambony no miandraikitra azy. Nolavin’ny filohan’ny Oniversiten’i Mahajanga, Profesora Emmanuel Rakotoarinony anefa izany satria dia andraikitr’izy ireo no mitsinjara ny trano ho an’ny mpianatra izay iarahana amin’ny filohan’ny fikambanan’ny mpianatra rehetra misy eny amin’ny « campus ».
Ny sabotsy teo dia niara-nanapaka io daty ny alarobia io ny filohan’ny oniversite sy ny fikambanan ‘ny mpianatra fa mifarana ny fandraisana ny lisitr’ireo mpianatra amin’ny fangatahana hipetraka amin’ny tranon’ny oniversite. Mahazaka mpianatra 2 250 ny fotodrafitrasa eny Ambondrona sy ny cité Tsaramandroso. 1 824 ireo mpianatra no efa nahavita ny nanatitra ny taratasy fangatahana ka 990 amin’izy ireo no mpianatra taloha ary 884 no vaovao.
Araka ny voalazan’ny filohan’ny Oniversite hatrany, aorian’io daty nivoaka io, dia hoesorina amin’ny trano ireo mpianatra tsy ao anatiny lisitra.
Raha jerena dia mety hiteraka korontana ao amin’ny oniversite indray ity olana amin’ny fizarana ny trano ity satria ireo mpianatra mivondrona ao amin’ny Bdeum dia tsy hanaiky ny fandaminana napetraky ny mpitantanana ary ny mpitantanana rahateo dia hentitra amin’ny fampiharana ny fanapahan-kevitra mba samy hahazo ny trano ipetrahana ireo mpianatra mamita ny fiarana eny amin’ny campus Ambondrona. Ho hita eo ny tohiny ny raharaha aoriana ny fivoahan’ny lisitr’ireo mpianatra nanao fangatahana.